निर्मला हत्या कान्ड नसेलाउदै अर्को बालिकाको हत्याको घटना पजल झै उल्झिदै, निर्दोष न्यायको आसमा « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
के एउटा मृत्यु भइ सकेको बालिकालाई न्याय दिलाउनु पत्रकारको दायित्व र कर्तव्य होइन? पैसाको लोभ लालचको भरमा गलत समाचार सम्प्रेषण गर्न लगाउने र लेख्नु दुबै कानुनि अपराध हो । जो कुसुरवार नै छैन त्यसलाई किन सजाय दिने? कुसुरवार हो भन्ने सबुत अझ भेटिएको छैन त? मेडिकल रिपोर्टमा सफा तरिकाले रेप भएको देखाइएको छैन भने प्रहरीले कुन कुसुरमा निर्दोषलाई थुनामा राखेको छ ? कतै यो सेटिङ त होइन? भन्ने जनतामा त्रास समेत फैलिरहेको छ ।
प्रहरी अनुसार पनि मृतक बालिकालाई रेप गरेको हो भन्ने कुनै प्रष्ट प्रमाण छैन । एउटा मान्छेले दिएको बयानको भरमा ४ जनालाई थुनामा राख्नु न्याय होइन र यो उचित पनि होइन । त्यसैले व्यान दिने व्यक्तिले बोलेको एक एक बोल सहि हो कि होइन त्यो पत्रकार र प्रहरी दुबैले छानबिन गर्नु असल नेपाली बिरको कर्तव्य हो ।
सिरहाको स्थानमा एक महिने सुरक्षा गाडको तालीम सुरु